Botika | TILY ETO MADAGASIKARA
Fampahafantarana ny fiatombohan’ny asa fandraharana sy varotra 2017 – 2018
Miarahaba anareo amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Lohan’ny Fiangonana.
Miarahaba ny ekipa DFaV manokana nahatontosa ny andraikitra rehetra nankinina taminy nandritra ny taompanabeazana lasa. Maro ny ezaka nataon’ny isam-paritany ary azo tsapain-tanana izany, tsy vitsy koa anefa ny olana nosedraina sy ny tsy fahatomombanan’ny asa nataonay ekipa DFaV na ny teny amin’ny Faritany izany na ho anay DFaV Foibe, ialany tsiny aminareo izany, mampanantena kosa anefa izahay fa hanao izay tratry ny herinay hanonerana izay tsy vita.
Indro ary ampahafantarina antsika fa manomboka ny Alarobia 18 Oktobra 2017 izao ny fandraisana ny fandraharahana rehetra eto anivon’ny fikambanana Tily Eto Madagasikara ary misokatra ihany koa Antsahamanitra manomboka amin’io daty io, ka toa izao ny ora : Alatsinainy hatramin’ny Zoma, 09 Ora 00 – 12 Ora 00, 01 Ora 00 – 04 Ora 00. Ny fandefasana entana mankany amin’ny Faritany kosa dia isaky Alakamisy hariva sy ny Zoma hariva ihany (fasan’ny karana sy Ambodivona).
Tiana ny mampatsiahy antsika rehetra fa mariky ny fahaveloman’ny fikambanana ny fahavitan’ny mpikambana ny adidy sy latsak’emboka, koa mino izahay fa tsy ho tara ny Faritany misy anareo amin’izany.
Tsy misy fiovana ny adidy rehetra fa mitovy amin’ny taon-dasa ihany:
Cible: 10.000 Ariary (4.000 Ar no miditra aty amin’ny kitapom-bola ary ny 6.000 Ar ho an’ny Faritany)
Beazina: 1.000 Ariary
Mpiandraikitra: 1.500 Ariary
Filoha: 3.000 Ariar
Filohan’ny KP: 5.000 Ariary
Mpikambana KP: 2.000 Ariary
Misy ny marika omena ireo nanefa ny latsak’emboka ka apetaka amin’ny karatra izany, hisy ihany koa ny marimpahavelomana omena ny Fivondronana nanefa ny latsak’emboka. Ny mpikambana manary karatra dia mandoha 500 Ariary ankoatra ny latsakemboka mahazatra.
Ireto kosa ny tsara ho fantatra
30 Aprily 2017: Farany handraisanay ny fandraharahana rehetra ho an’ny mpikambana tranainy.
30 Jona 2018: Farany handraisanay ny fandraharahana rehetra ho an’ny mpikambana vaovao.
Ny karatra rehetra dia asian’ny Filoham-paritany Sonia na izay olona tendreny hanolo azy amin’izany.
Tsy maintsy ampahafantarina ny trano fiantohana ny hetsika rehetra mifindra toerana (Lasy) noho izany dia alefanareo aty aminay ny mahakasika izany isaky ny misy hetsika, ekena ny fahasarotan’ny asa miandry kanefa ny toe-tsaina vonona mandrakariva no maha-Tily antsika koa mino izahay fa mpanabe vonona mandrakariva ny DFaV, ampiasao ny fitaovan-tserasera rehetra misy.
Serasera: Finday fiantso: 033 78 206 07, mailaka: dfavfoibe@gmail.com, base des données http://bdd-tily.com/DFAV
Dia mirary antsika rehetra hahatontosa ny asa miandry rehetra eo ambany fitahian’ny Tompo.
Ny Filohan’ny Departemantan’ny Fandraharahana sy Varotra